‘विकास र समृद्धिको लागि मेरो उम्मेदवारी’ - Kavre Times Weekly | Kavre Times Weekly
चन्द्र लामा,प्रतिनिधि सभा
काभ्रे क्षेत्र नं. १ को प्रदेश २ का उम्मेदवार
नमोबुद्ध नगरपालिका ८ डराउने पोखरी दारिम बोटमा पिता जीतबहादुर तामाङ÷माता अष्टमाया तामाङको छोरा चन्द्र लामाको जन्म २०३७ माघ २१ गते भएको हो । बाल्यकाल विद्यार्थी जीवनमा नै २०४८ साल बाटनै राजनीतिमा होमिनुभएका निर्माण व्यवसायि संघ काभ्रेको अध्यक्ष, युवा संघ नेपालको केन्द्रिय उपाध्यक्षको जिम्मेवारी समाल्नुभएका लामा नेकपा एमाले काभ्रेको सचिवालय सदस्य भएर कार्य गरिसक्नुभएको छ । राजनीति देशको दिर्घ विकास, सामाजिक विभेदको अन्त्य र जनताको जीवनमा समृद्धि ल्याउन हुनुपर्ने हुँदा त्यो कार्य नेकपा एमालेको पार्टीले मात्र गर्न सक्ने भएकोले राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकास र स्थिर सरकार गठनका लािग नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रबिच चुनावी तालमेलसहित वाम एकता भएको धारणा राख्नुहुन्छ ।
० आगामी मंसिर २१ गते नजिकिदै गरेको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि सभा समारोह जनताको बिच घरदैलो अभियानमा जुट्नु भएको छ, प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो ?
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै देशमा जनताको प्रतिनिधिबाट नयाँ संविधान जारीसँगै राजनैतिक मुद्धाको छिनोफानो भइसकेको छ । अब देशमा आर्थिक क्रान्तिलाई सफल बनाउनुछ । अबको युग भनेको राष्ट्र निर्माण र विकासको युग हो । अबको १० वर्षभित्र देशमा विकासको लहर ल्याइ सबै जनतालाई सुखी र खुसी राख्नुपर्ने छ । संघीय संरचना अनुरुपको नयाँ ढंगको यो निर्वाचनमा जनताहरु निक्कै उत्साहित भएको पाएका छौँ । भुकम्पको कारण गाउँका बस्तीहरु सबै सखाप भएर जनता छाप्रोमा नै बस्न बाध्य छन् । अब बजेट निकासा गरि घर निर्माण गर्ने वातावरण तयार गर्न जनताहरुले आग्रह गर्नुभएको छ । यो कार्यलाई सफल बनाउने कार्य गर्न वाम गठबन्धन तयार छ । भुकम्प पिडितको समस्यालाई चाडो निकाु दिन हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ ।
० काभ्रे क्षेत्र नं. १ को २ को वाम गठबन्धनका उम्मेदवार चन्द्र लामालाई नै जनताले मत किन दिने ?
चन्द्र मा नेकपा एमाले पार्टीको सच्चा सिपाही हो । जनताको सुख दुःखमा साथ दिएको व्यक्ति हो । सामाजिक विभेदको अन्त्य सबैलाई समान अवसर र अधिकार प्रदान गर्न लाग्ने पार्टीको इमान्दार योद्धा हो चन्द्र लामा । पनौती नगर, नमोबुद्ध नगरपालिकालाई व्यवस्थित नगरपालिकाको रुपमा विकास गर्ने योजना हामीले बनाएका हौँ । पनौती नगरलाई धार्मिक तथा साँस्कृतिक पर्यटकनको रुपमा विकास गर्न र नमोबुद्ध नगरलाई धार्मिक पर्यटनको नमुना विकास गरि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याइ जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने, पनौती र नमोबुद्ध दुवैमा बैकल्पिक राजमार्गको अवधारणालाई सडक निर्माण गर्ने रोशी र दाप्चा क्षेत्रमा सम्भावना रहेका स्थानमा सिँचाइको प्रबन्ध मिलाइने छ । जनताको चेतना स्तरमा वृद्धि गर्ने कार्यक्रम, युवावर्गलाई स्वरोजगारको अवस्था सृजना गर्न उद्यमशिलताको विकास गर्ने वातावरण तयार गरेका छौँ । महिलाहरुको आर्थिक पक्ष बलियो बनाउन महिला सशक्तिकरण गर्ने कार्यमा, उद्यमशिलताको विकास तालिम सिलाइबुनाइ तालिमको व्यवस्था गर्नेछौँ ।जनताले उत्पादन गरेका कृषिजन्य पदार्थलाई सहज ढङ्गबाट बजारीकरण गर्न कच्ची मोटर बाटोलाई स्तरउन्नती गर्ने, डाँडापारी क्षेत्रमा वडाहरुमा सडकबाटो विस्तार स्तर उन्नती, स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन, १५ देखि २० वटा शैयाको अस्पलात निर्माण डाडापारी क्षेत्रका विद्यार्थीहरु +२ अध्ययन पुरा भएपछि बनेपा धुलिखेल र पनौती अध्ययन गर्न आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न डिग्रीसम्मको अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्थाको विकास गर्ने भौतिक संरचना निर्माण प्रबन्ध मिलाउने, शिक्षा र स्वास्थ्याको पहँुच, मेरो क्षेत्रमा एक घर एक पानीको धारा जडान गरि शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था गर्नेछु । महाभारत गाउँपालिकामा असंख्य जडिबुटिको उत्पादन हुने स्थान छ । यसको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरि बजारीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइने योजना बनाएका छौँ । फलफुल तरकारी बजारसम्म निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुनेगरि मोटर सडक बाटोको स्तर उन्नती गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न भौतिक संरचनाको निर्माण गर्ने, खोलामा आवत जावत सहज गर्न पुलको निर्माण गर्ने कार्य गर्न म प्रतिबद्ध छु ।
० युवा जनशक्ति दैनिक विदेश पलायन भएका छनु । दक्ष जनशक्ति बाहिर गएपछि देशको विकास कसले गर्छ, यसको बारेमा के सोच्नु भएको छ ?
युवा संघ नेपालको केन्द्रिय सचिव भएर २० वर्ष कार्य गरेको व्यक्ति हँु । अहिले केन्द्रिय उपाध्यक्ष द्धु । युवा वर्गलाई मुलुकमै योग्यता अनुसार कार्य गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । उद्योग धन्दा कलकारखाना निर्वाध रुपले सञ्चालन गर्ने, नयाँ उद्योगको सम्भावना रहेका क्षेत्रमा राज्यले जग्गा उपलब्ध गराएर भएपनि कृषि उद्योग जडिबुटिका उद्योग जुन जुन क्षेत्रमा जे जे सम्भावना छ त्यही अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन राज्इ तयार हुनुपर्छ । विगतमा राज्यको नीति नै फितलो र कमजोर भएकाले उद्योगधन्दा सञ्चालन हुन नसकेको हो । अब स्थानीय प्रदेश र केन्द्र गरेर कार्य विभाजन गरेको छ । अबको प्रतिनिधि, प्रदेश सभाको निर्वाचन पछि आफ्नो प्रदेशको विकास गर्न आवश्यक पर्ने ऐन नियमकानुन आफैले निर्माण गर्न पाउने भएको छ । अब युवाहरुले देशमा नै बसेर केहि न केही उद्यम गर्न सक्ने अवस्था सृजना हुन्छ । देशलाई आत्मनिर्भरको बाटोमा अघि बढाउने कार्य गर्नु जरुरी छ । अबौँ रकम विदेशबाट रेमिट्यान्स भित्रन्छ त्यो कहाँ जान्छ कहाँ त्यसको सहि सदुपयोग गर्ने गरि एउटा राष्ट्रिय नीति बनाइ त्यसको लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । जस्तै हाइड्रोपावरको विकास, पशुपालन व्यवसाय, मत्स्यपालन व्यवसाय जुनसुकै पनि गर्न सकिने प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ । वाम गठबन्धनको सरकार बनेपछि कुनैपनि युवा बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था हुदैन । समग्र राष्ट्रको चौतर्फ विकास र समृद्धी गर्न हामी निरन्तर लागि पर्नेछौ ।
० १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्छ भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नु भनेको झुटको खेती गर्नु जस्तै हैन ? कसरी सम्भव छ अहिले आफ्नै देशको लागि पुग्ने उत्पादन गर्न सकेको छैन ।
हाम्रो देश नेपाल विकासको अथाह सम्भावना भएको देश हो । घरको छाना छानाबाट पानी बग्छ, बारी र खेत बाझै राख्छौ हामी ने.पाली धेरै अल्छी भएका छौँ । अरुको कुरा काटेर हिड्छौ, क्यारिमबोर्ड र लुडो खेलेर जीव्न बिताउँछौ । लगनशिल भएर कार्य गर्नुप¥यो । असम्भव भन्ने केही र्छन । विश्वको जलस्रोतको धनि देश हामी मिनरल वाटर किनेर खान्छौँ । खेतीबारी सिँचाइ गर्न सकेका छैनौँ । ८० प्रतिशत स्रोत साधन त्यतिकै खेर गएको छ । त्यसको सहि सदुपयोग गर्न सकेका छैन हाम्रो देश नेपाल हरेक क्षेत्रको आ–आफ्नै महत्व छ । हिरा फल्छ तर लगनशिल भएर कार्य गर्नुप¥यो । उद्यम गर्न थाल्ने लगानीकर्तालाई प्रोत्साहीत गर्ने नीति बनाउनु प¥यो । विदेशी कम्पनीलाई हाइड्रोपावर निर्माण गर्न अन्धाधुन्द तरिकाले लाइसेन्स मात्र दिने काम चाहि नगर्ने होइन । कार्य गर्नेलाई मात्र दियौँ नगर्नेको लाइसेन्स खारेज गरौँ नीति नियम कडा हुनुप¥यो । मुलुकको समृद्ध र विकास हुनुप¥यो दलगत स्वार्थ भनदा माथि उठेर त्यो वा यो बहानामा विकासको विरोध गर्ने हैन राम्रो गरेको कार्यलाई समर्थन नराम्रो कार्य गरेकोलाई खबरदारी गर्ने गरौँ । यसो भएमा देशका हरेक विकासका आयोजना सम्पन्न हुन्छन् र देश समृद्ध बन्छ। वामगठबन्धनको बलियो सरकार बन्छ र १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गरि विदेश निर्यात गरि मुलुकलाई झिलिमिलि पारेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्न चाहन्छु ।
आम जनताहरुलाई निर्धक्क भएर वाम गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुहोस किनभने देशप्रेमी विकास प्रेमी सबै जनतालाई सुखी र खुसी राख्न निरन्तर लागि परेको पार्टी नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियामा चल्ने देशलाई आत्मनिर्भरको बाटोमा अघि बढाइ विकासको मुल फुटाउने कार्य वामगठबन्धनले मात्र गर्न सक्छ । काभ्रेको क्षेत्र नं. १ को समग्र विकास गर्ने अभिभारा हाम्रो हो । यहाँहरुको उन्नती प्रगतिम हाम्रो निरन्तर सहयोग रहन्छ त्यसैले काभ्रे जिल्लामा वामगठबन्धनका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुहोस हामी यहाँहरुलाई विकास दिनेछौँ ।